Door Lock Screen 4K Wallpapers အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » စိတ်ကြိုက်ပြင်ခြင်း » Door Lock Screen 4K Wallpapers
စိတ်ကြိုက်ပြင်ခြင်း | 20.7MB
ဒီကြော့တံခါးကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ် Download - AppLock နှင့်စစ်မှန်သောတံခါးကိုဖွင့်ပွဲသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူဖန်တီးမှုတံခါးကိုဒီဇိုင်းသို့သင့်ရဲ့ smartphone ရဲ့မျက်နှာပြင်သော့ကိုဖွင့်။ AppLock ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှင့်ပုဂ္ဂလိက app များကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူပုဂ္ဂလိကအမှတ်တရများကာကွယ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ pin ကို, ဒီ app lock.Door သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လမ်းမရှိသောသင်တို့အဘို့အကာသာမန်ထက်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လေးပေါင်းစပ်စကားဝှက်ကိုမသတ်မှတ်နှင့်သင့် smart ဖုန်း၏လျှို့ဝှက်ပျော်မွေ့
အများစုမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နောက်ခံတံခါး Lock ကိုမျက်နှာပြင် - ။ Google Play Store မှာ AppLock ။ စကားဝှက်နဲ့ Protect privacy ကို, ပုံစံ။ 30 ကျော်တိုင်းပြည်များတွင်
✿နံပါတ် 1 တံခါး Lock ကိုမျက်နှာပြင်။
✿နံပါတ် 1 က App Lock ကို 30 ကျော်တိုင်းပြည်များတွင်တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများ။
✿ 5000000 ကျော်အသုံးပြုသူများအ Locker app ကို
ဒီအေးမြချစ်သောသူ တံခါးသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ဆောင်ပုဒ် "AppLock" ၏နယူးအင်္ဂါရပ်တင်ပြ
။ AppLock ပုံစံကို အသုံးပြု. app များကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးမှာတစ်ခု AppLocker သို့မဟုတ် App ကိုကာကွယ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Lock ကိုကျပန်းကီးဘုတ်နဲ့မမြင်ရတဲ့သော့ခတ်ပုံစံ screen ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အလုံခြုံဆုံးရှိပါတယ်! ဒါဟာအစသင့်မိုဘိုင်းဘက်ထရီ၏ကု minimize ပါလိမ့်မယ်။
တံခါးသော့ခတ်မျက်နှာပြင် - App ကို Lock ကိုသုံးစှဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်သင်တို့အဘို့အထူးထူးအပြားပြားအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ တံခါးကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ် app ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုတစ်ခုအံ့သြဖွယ်များနှင့်စတိုင် Locker ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ်လက်တွေ့သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်းရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်လုံခြုံ Locker ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့နှင့်လျောက်ပတ်ကြည့်ကိုငါပေးမည်။ အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်မှအခမဲ့ပေးသောအကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးမျက်နှာပြင်အေးမြ Locker app ကို။ တံခါးကိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်လွန်းနီးပါးတိုင်း Android device ကိုဗားရှင်းအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။ သငျသညျတက်ဘလက်ပေါ်စတိုင်သစ်သားတံခါးကိုမျက်နှာပြင်ကိုခံစားအဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်းနိုင်ပါတယ်
★နေ့စွဲနှင့် သင့်ရဲ့သော့ခတ် sequence ကို၏ hack က၏★ဘယ်သူမျှမကအခွင့်အလမ်း
★ဘယ်သူမျှမက privacy ကိုချေမှုန်းရေးကိုအသုံးပြုရန်★အလွန်အသုံးဝင်သောလွယ်ကူ
စကားဝှက်တစ်ခုအဖြစ်သင့်ပုံစံသော့ခတ် Set ★
★လှပ & ခေတ်မီ interface ကို
★အခမဲ့တံခါး Lock ကိုလူတိုငျးအတှကျ ။
အကိုဘယ်လို Lock ကိုတင်ထားရန်။
မျက်နှာပြင် setting ထဲကနေသင့်ရဲ့သစ်သားတံခါးကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ် Enable အဆိုပါ pass ကုဒ်ပုံစံ set ကြောင့်သတိရ
သင့်ရဲ့ pass ကုဒ်ပုံစံ Enter ပွင့်လင်းဖို့တံခါးကိုဖု Push
အမည်သို့သတ်မှတ်မည် AppLock မှ: ။ ။
App ကိုကလစ်နှိပ်ပါ app ကို setting ကိုအတွက် Lock ကို Tab ကိုကျနော်တို့တိုးတက်မှုလုပ်နိုင်အောင်သင့်ရဲ့အဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ
သင်လုံခြုံချင်ကို Select လုပ်ပါက App
ပုံစံနှင့် set ကိုသော့ခတ်
ကြောက်မက်ဘွယ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအသုံးဝင်သော tool ကို ement နှင့်ပေး။ ! သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထား ..
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖြစ်နှင့်သစ်သားတံခါးကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် - App ကို Lock ကို .. !!
True? Not.. True.. Idon't No.